Namuhla, abantu abaningi ngokuvamile kunesidingo ukufinyelela izinsiza we womhlaba noma inethiwekhi yenkampani kusuka noma yikuphi kumephu komuzi, izwe nezwe. Ukuhlinzeka amathuba umsebenzi ukhululekile futhi ukuzijabulisa, ulwazi search usebenzisa ikhompyutha, i-laptop, umakhalekhukhwini uma ungaphandle ehhovisi lakho noma ekhaya ivumela wireless technology. Kuze kube manje, futhi elalidume kunawo wonke emhlabeni inethiwekhi yendawo usebenzisa ubuchwepheshe WLAN. Kuyini, kanjani futhi uxhuma kanjani kule nethiwekhi? Izimpendulo zale mibuzo, uzofunda ngokufunda isihloko ngenzasi.
Umqondo kunethiwekhi engenantambo
WLAN imelela Wireless Area Local Network, okuyinto zihunyushelwe izindlela Russian "LAN okungenantambo". Ngokuhamba umsebenzi wabo ukusungula indlela yokuxhumana futhi idatha ukudluliswa alisebenzisi inethiwekhi ikhebula (njengoba kwaba njalo endabeni ka-esiku uxhumo lezintambo), futhi imvamisa radio. Lokhu kwenza kube esizimele endzaweni letsite futhi iyatholakala inqwaba abasebenzisi. Ethandwa kakhulu okwamanje ubuchwepheshe yokudlulisela ulwazi phezu airwaves kuyinto-Wi-Fi.
Ukuxhumana phakathi WLAN ne-Wi-Fi
-Wi-Fi - kungcono isifinyezo, ukunciphisa umphumela ethemini Wireless Ukwethembeka, noma "ukuthembeka engenantambo." Ngokusetshenziswa lobu buchwepheshe, abasebenzisi bathola ukufinyelela kwenethiwekhi ku yonke indawo ekuhlanganiseni kwaso. laptops Iningi Wi-Fi uphawu - ke kusho ukuthi kukhona iyahambisana amanethiwekhi WLAN.
Iyini indawo cula kunethiwekhi engenantambo nalokho incike? Kayisilutho ngaphandle Ukusabalala endaweni-Wi-Fi, ngaphakathi lapho abasebenzisi Ungahambisa ngaphandle kokuphula uxhumano. Ngokuvamile, ibanga phezu okuyinto amasignali angadluliselwa imayelana 100 metres. It kuxhomeke ezicini eziningi, ikakhulukazi - phezu nezithiyo eziningi nezinhlobo zabo. Kunoma ikuphi, WLAN indlela eziqinile uxhumano kuka ikhebula amanethiwekhi. Inani labasebenzisi kuyinto cishe elinganiselwe, futhi kungaba nekwakheka kwelulwimi etimeni isinyathelo ngokusungula agqagqene (uyazikhethela) zokungena futhi ukwandisa isibalo abasebenzisi kule ndawo efanayo.
Ukutholakala zenethiwekhi angatholakala hhayi kuphela kwi-PC / laptop, kodwa futhi ephathekayo. Uyini WLAN efonini yakho futhi kanjani ukuyisebenzisa? Empeleni, lokhu kuyinto inthanethi wireless abavamile, kodwa hhayi i-PC-laptop, kanye efonini yakho ephathekayo. Lomsebenzi manje lokuhlanganiswe nawo onkhe onobuhle zamanje futhi kungaba elula kakhulu. Ngokwesibonelo, i-Wi-Fi, kungenziwa abahlezi endaweni yokudlela noma elinde indiza yakho esikhumulweni sezindiza - ngokuvamile, kunoma iyiphi indawo yomphakathi, lapho kukhona Ukusabalala ezifanele. Kulokhu, ukusetshenziswa inkonzo ngokuvamile mahhala futhi akuxhomekile khona / ukungabikho ikhadi le-SIM. I negative kuphela - ngokushesha ihlala ibhethri. Xhuma i-Wi-Fi (WLAN) kungaba amasethingi efoni "Amanethiwekhi Wireless", uma sendaweni eyamukela i yokungena.
amanethiwekhi wireless Local asetshenziswa njengoba isandiso noma okunye ukuze ikhebula amanethiwekhi. ukufakwa wabo ngenza okufanele futhi, ngaphezu kwalokho, kunconywa ukuthi lapho siqhuba ikhebula kuyinto inexpedient kezomnotho esingesihle. A WLAN ikuvumela ukuba imali kanye nesikhathi ayadingeka wiring. Ngakho, singaqokomisa zako ezisemqoka:
batfole inethiwekhi ne-Internet, kungakhathaliseki ukuthi indawo yomsebenzisi (ukuhamba ngenkululeko + inkululeko ukuthola ulwazi);
isivinini lula futhi sisheshe yokwakha;
ikhono kalula ukwandisa inethiwekhi;
ukuhambisana ne ezihlukile / amamodeli we amadivaysi.
Izinzuzo kunethiwekhi engenantambo ayikwazi overestimated (noma ngabe isetshenziswa endlini noma ngaphandle kwalo), kodwa ngenxa izilungiselelo WLAN efulethini / indlu - ikhambi ephelele umsebenzi okuntofontofo e-Inthanethi, ikakhulukazi uma ukufinyelela liyadingeka amalungu omndeni eziningana. Okulandelayo uzonikezwa ngabaphathi bayo uxhumano.
Ukuxhuma ukusetha WLAN
Kuyini inethiwekhi ekhaya engenantambo nalokho izakhi ke yakhiwe? Kuyoba kuqukathe imodemu / router (ukufinyelela iphuzu) namakhompyutha eyodwa noma ngaphezulu (amaklayenti). Kusolwa ukuthi usunayo i imodemu noma router, i-Internet futhi baqhuba adingekayo WLAN-umshayeli (uma kudingeka, kungaba ukulandwa kalula kunethiwekhi nganoma yisiphi adaptha imodeli okungenantambo).
Isinyathelo sokuqala ukuba uthole ukuthi libeke router:
kuyinto efiselekayo uyiphakamise ephakeme ukuze isignali is kahle yasakazwa kulo lonke yokuhlala endlini;
ukususa ibanga esiphezulu kusukela imishini ehlukahlukene futhi isebenzisa imvamisa 2.4GHz (ithelevishini, microwave, njll)., ukuze ngingasebenzisi ukugxambukela uxhumano.
Qhubekisa ngokuthwebula ulungiselele yokufinyelela (ie umzila):
Iya kunoma isiphi isiphequluli futhi yekheli faka IP-ikheli imodemu yethu. Ungayithola kumadokhumenti ehambisana nomkhiqizo. Cindezela u-Enter inkinobho.
Thina bayamenywa ukungenela login kanye nephasiwedi. Lemisebenti ingaphindze ezitholakala imibhalo efanele. Okuzenzakalelayo ngokuvamile lisetshenziswa umusi admin / 1234 (kodwa ingahluka).
Sithola kwimenyu enkulu bese uthola iphuzu WLAN. Indlela ukuxhuma kunethiwekhi engenantambo? Kunalokho Wireless Lan wafaka isheke ukuze kusebenze. Ngakusasa umugqa Igama (SSID), faka igama wenethiwekhi yakho (ngalo uyoboniswa ohlwini amanethiwekhi atholakalayo). Ngokulandelayo, bhala igama esifundeni, futhi Channel nkambu ukusetha isipele. Chofoza u- "Sebenzisa".
Thina uqhubekele izilungiselelo ukubethela (izindlela ezahlukene). Vula Izilungiselelo ithebhu bese ukhetha i-WPA (noma WPA2) - Lesi sivumelwano nokuvikeleka singcono 802.1x yisikhathi. Okulandelayo, udinga ukufaka i-password (kuye ngokuthi model of router angathathwa ngokuthi ehlukile - Oku-wabelane Key / Ezokuphepha Ecryption, njll). Kufanele kube yini ngaphansi kwezinhlamvu ezingu-15-22. Chofoza "Yamukela".
Manje udinga ukubhalisa amagama amadivayisi lapho uzoba ukufinyelela kunethiwekhi engenantambo. Ukhetha ukusuka uhlu imishini exhunyiwe ku Isethaphu yohlu lokufinyelela (Advanced / Izilungiselelo imenyu).
The touch sokugcina: phambi lento Jikela Access Control On ukubeka umkhaza. Ready nokuvikeleka WLAN wenethiwekhi yakho.
Kuyini VPN? Lokhu isengezo senethiwekhi ezimele phakathi (router) nekhompyutha yami, okuyinto Kunconywa ukuba usetshenziselwe ephephile ukuthumela idatha ngaphakathi inethiwekhi. Ngenxa yale njongo kukhona uhlelo Hotspot Shield.
Ukuze ulungise wonke amakhompyutha amaklayenti ukusebenzisa inethiwekhi isethaphu wizadi bese usetha yonke imingcele ezisetshenziswa yokungena.
Ngokulandela imiyalelo ngenhla, uzokwazi ukusetha i-WLAN inethiwekhi wireless ukuthi ivikelwe okunokwethenjelwa ukubethela algorithm. Manje ekhaya lakho kuyodingeka Ukusabalala endaweni yayo se-Wi-Fi - futhi ukusetshenziswa kwe-Internet iyoba elula nakakhulu futhi kube lula.
Indlela ukudala i-albhamu ka-"VKontakte"? imfundo
Ukukopela retweets - kuyini? Indlela ukukopela noma susa retweets?
Yekuchumana sendlela ukushintsha ngosuku MacOS
Uhlelo Ithethwe izingane ngenkulumo iziyaluyalu kuzosiza ingane yakho ulungele esikoleni
Module izakhiwo Chalet sokhuni: injongo, idivayisi